के हामी कम्युनिस्ट हौं ? के भन्छ मार्क्सवासी दर्शन ? बिहिवार, श्रावण ७, २०७८
नेपाली राजनीतिले बङ्ग्याइदिएको प्रतिगमनको अर्थ शनिवार, जेठ २९, २०७८
जनताको जिम्मा राज्यले लिने हो कि जनता स्वयंले ? आइतवार, जेठ २३, २०७८
कतारमा मेरो कोरोना अनुभव : कोरोना जित्नलाई हिम्मत र मनोबल जरुरत हुँदो रहेछ गएको मार्च १९/२० देखि नै मलाई हल्का टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने समस्या थियो । तर मैले त्यसलाई साधारण तरिकाले लिएँ । किनकि अहिले यहाँको मौसम परिवर्तन हुने समय हो । यस्तो साधारण रुघाखोकीमा आत्तिनु हुँदैन भनेर वास्ता गरिनँ । म रोजगारीको शिलशिलामा ११ वर्षदेखि कतारको दोहामा छु । यस्ता समस्या अरुबेला पनि आउँथे । मैले सामान्य ठानेर कम्पनीमै काम गरिरहेँ । शुक्रवार, जेठ ७, २०७८
कोरोना अनुभव : आइसोलेसनमा १ महिना बिताउँदा मैले जे भोगेँ कोरोना महमारीको विश्वव्यापी संक्रमणका सन्देशकाबीच सावधानी आपनाएर आफ्ना दैनिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन निक्कै प्रयास गरिरहेको थिएँ । प्रयासहरु फिक्का सावित हुँदै लकडाउनका कारण थुप्रै दैनिक कामकाज प्रभावित भइरहेका थिए । सबै यात्राहरु प्रभावित भएका थिए । घरबसाइका क्रममा एक्कासी भाद्र १८ गते वेलुका ज्वरो र शरिरका जोर्नी खपिनसक्नु गरी दुख्यो । यो क्रम ४८ घण्टा रह्यो । १९ गते रातीसम्म ज्वरो र शरिरका जोर्नी दुखाई कम भइसकेको थियो, तर पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ भन्ने आशंका भएकाले २१ गते स्वाब टेष्टका लागि पठाइयो । सोमवार, आश्विन २६, २०७७
कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन् बलत्कार ? बलत्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन् बिहिवार, आश्विन १५, २०७७
कोरोना अनुभव : आइसोलेसनमा पुगेको दिन बाँच्छुजस्तो लागेको थिएन कोरोना भाइरसबारे बजारमा दुईथरि हल्ला छन् । एउटा हल्ला; यो रुघामर्की हो, सामान्य फ्लु हो; बेसारपानीले पचाइदिन सकिन्छ । आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । अर्को हल्ला छ- यो सामान्य रोग हुँदै होइन । सचेत बन्नु जरुरी छ । यी दुवै हल्लामा कत्तिको सत्यता छ त्यतातिर नजाउँ । बरु आफैँले कोरोना संक्रमित हुँदा भोगेका अनुभव यहाँहरूलाई बताउँ । शनिवार, आश्विन १०, २०७७
ओखलढुंगाखबरबाट डिलिट गरिएको त्यो समाचार, स्वास्थ्य कार्यालय चिप्लिँदा यसरी बन्यो हल्लाको समाचार* हिजो अर्थात् भदौ १२ गते । विहान अलि ढीलै उठेछु । ओखलढुंगाखबरडटकममा राशिफल अपडेट गर्ने दैनिकी नै हो मेरो । ज्योतिषले राशिफल इमेलमा पठाइसकेका थिए । राशिफल सम्पादन गर्नु आवश्यक थिएन, त्यसैले अनलाइनमा अपडेट गरिहालेँ । राशिफल अपडेट गर्दा विहानको ७ बजिसकेको थियो । एउटा फोन आयो, चिनेकै मान्छेको फोन थियो त्यो । 'मिसन अस्पतालमा डाक्टरलाई कोरोना लाग्यो रे,' उनले भने, 'उतैबाट आउने मान्छेले हल्लाखल्ला गर्दैछन् ।' शनिवार, भदौ १३, २०७७
कोरोना भाइरस भन्दा हजारौँ गुणा घातक सामाजिक भाइरस अहिले कोरोना भाइरसको महामारी सिंगो मानव जातीका लागि विश्वव्यापी चुनौती भएकाे छ । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण भएका या सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका तथा एकल बासमा बसेका मानिसहरूलाई हेर्ने नजर कुनै गम्भीर अपराध गरेको अपराधीलाई भन्दा तुच्छ देखिन्छ। नेपाली समाजमा पढेलेखेका केही डाक्टर, प्राध्यापक, वकिल, नेता, सामाजिक अभियन्ता तथा समाजसेवीहरू बाट नै यस्तो व्यवहार भइरहेको छ । शुक्रवार, भदौ ५, २०७७
सूर्यग्रहण २०७७असार ७ गते आइतबार बारे विशेष जानकारी शनिवार, असार ६, २०७७
कोरोनाको माहामारीसँगै तरुण युवाहरूले देशको लागि गर्नु पर्ने भूमिका शनिवार, जेठ २४, २०७७
परदेशीको गाउँ फर्कने चाहना आइतवार, बैशाख २१, २०७७
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई मेरो सुझाव ! शनिवार, बैशाख २०, २०७७
कोरोनाको भय : मनोसामाजिक समस्याको जोखिम कोरोनाको प्रकोपले बिश्व नै अहिले आक्रान्त बनेको छ । रोगको संक्रमण तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिको बेला तनाब, डर, चिन्ताका कारण विभिन्न किसिमका लक्षणहरु देखिन सक्छन् । शनिवार, बैशाख २०, २०७७
होम क्वारेन्टिनमा के गर्ने ? बिहिवार, बैशाख १८, २०७७
बन्दाबन्दीमा मुहान संरक्षण गर्ने कि ! गाउँमा आजभोलि युवाको जमात धेरै देखिन्छ । जन्ती र मलामिको ताँतीमा महिला, बालबालिका र बुढाबुढी मात्र देखिने गाउँमा पनि युवा देखिन्छन्, अहिले । बन्दाबन्दीमा घर आएका उनीहरु फुर्सदिला छन् । बुधवार, बैशाख १७, २०७७